अमेजन बिक्री विशेषज्ञले तपाइँ कुन सेवाहरूको आशा गर्न सक्नुहुन्छ?
जो अमेजनमा उत्पादन बेच्न नयाँ छन्, धेरै समस्याहरू सामना गर्न र आफ्नो पैसा गुमाउन सक्छ। यही कारणले तपाईंलाई आत्मविश्वास र ज्ञान महसुस नगरेसम्म यो अमेजन बिक्री विशेषज्ञको साथ सहयोग गर्न सल्लाहकार छ।
अमेजन बिक्री विशेषज्ञसँग तपाईंको सहयोगको प्रक्रियाले तपाइँको व्यवसाय र तपाईंको प्राथमिक व्यापार उद्देश्यको प्रकृति निर्धारण गर्न परामर्शको साथ सुरू गर्नु पर्छ। एउटा विशेषज्ञले तपाईंलाई बलियो मार्केटिङ रणनीति निर्माण गर्न र तपाईसँग अमेजनमा पहिलो चरणमा छलफल गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। तपाईंको सल्लाहकारले तपाईंको उत्पादन र लक्षित दर्शकहरूलाई तपाईंको बजार आला अनुसन्धान र प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण बनाएर बुझ्नुपर्दछ। यसको पछि मात्र, तपाईं कुन सेवा र अनुकूलन प्रविधिहरू तपाईंको व्यवसायको लागि आदर्श हुनेछ भनेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरुवात व्यापारीहरू र अमेजन बिक्री विशेषज्ञहरूको बीच सहयोगको आधार हो। तल हामी अमेजन विक्रेता परामर्श सेवाहरूमा हेर्ने उत्तम गुणहरू छलफल गर्नेछौं।
अमेजन परामर्श सेवाहरूको लागि आधारभूत नियम
अमेजन बिक्रीको विशेषज्ञहरूको क्षमता र उनीहरूले प्रदान गर्ने ग्राहक सेवाको गुण
जब तपाईं अमेजनमा आफ्नो उत्पादनको पदोन्नतिमा सहयोग गर्न कसैलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई उनीहरूको अनुभव, व्यावहारिक कुञ्जीहरू, र भर्खरै सकारात्मक परिस्थितिहरू जाँच गर्न आवश्यक छ। एक सल्लाहकारले तपाइँलाई हालको परामर्श गतिविधिहरूको उदाहरण प्रदान गर्नुपर्दछ। सम्भवतः उनीसँग अमेजन वा आफ्नै इ-वाणिज्य व्यवसायमा एक व्यापार चलिरहेको अनुभव छ। सबै मा, तपाईं आफ्नो उपलब्धिहरु को जाँच गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, तपाईं आफ्नो पैसा बर्बाद गर्न जोखिममा हुनुहुन्छ।
ग्राहक सेवाको गुण पनि मामिलामा छ। राम्रो बिक्रेता परामर्श सेवाहरू तपाईंको समय बर्बाद गर्दैन, घडी वा बन्द। तिनीहरूले तपाईँका अवसरहरू बारे सचेत गराउँदछ र तपाईले बिना केहि गर्न सक्नुहुनेछ बेच्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू तपाईंको सूची अनुकूलन अनुकूलनमा काम गर्न र छिट्टै सकेसम्म आफ्नो अमेजन उपस्थिति बलियो बनाउन। अधिक के छ, उनि तपाईंलाई दैनिक रिपोर्ट र संचार को खुला लाइन प्रदान गर्दछ।
तपाईलाई गुणवत्ता एसईओ सेवाहरू प्रदान गर्नु पर्छ
तपाईंको उत्तम अमेजन बिक्री विशेषज्ञ अमेजन खोजी इन्जिन अनुकूलनमा एक गुरु हुनु पर्छ।.अमेजन एसईओले आफ्नै नियम र रणनीतिहरू र मानक खोजी इन्जिन अनुकूलनको रूपमा फरक काम गर्दछ।
यदि तपाईंलाई महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाइँसँग उत्कृष्ट उत्पादन सूचीबद्ध छ, तर यो राम्रो तरिकाले परिवर्तित छैन, तपाईले सम्भवतः तपाईंको अवसरहरू र बर्बाद गर्ने समय गुमाउनु भएको छ। एक अनुभवी अमेजन बिक्री विशेषज्ञले तपाईंको सूचीमा दोस्रो जीवन दिन सक्छ, यो सबै अमेजन आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलन गर्न सक्छ। एक राम्रो तरिकाले लिखित सूची सफलताको लागि तपाईंको कुञ्जी हो। यही कारणले तपाईलाई सम्भावित ग्राहकलाई दिमागमा राख्नु आवश्यक छ। तपाईले लक्षित गरेको लक्षित दर्शकहरूसँग मेल खाने कीवर्डहरू स्थापित गर्न आवश्यक छ र तपाईंको उत्पादन अमेजन SERP सम्म पुर्याउँदछ।
तपाईंको बिक्री सल्लाहकारले तपाईंलाई आफ्नो सान्दर्भिक सूचीको सूची प्रदान गर्दछ र तपाईंको व्यापार खोजी सर्तहरूको लागि लक्षित गर्नु पर्छ। अमेजनमा तपाईलाई वास्तविक धक्का दिन सक्ने शब्दहरू लामो-तालिकामा प्रतिस्पर्धात्मक खोज सर्तहरू छैनन्। तिनीहरूलाई भेट्न तपाईंलाई एक परिष्कृत बजार आला अनुसन्धान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
दायाँ किबोर्डहरू तपाईंको व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण छन् किनकि उनीहरूले तपाइँको बिक्री बढाउन, खोज रेटिङमा तपाईंको सूची बढाउन र नयाँ सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन्।
यसैले, यो अमेजन बिक्री विशेषज्ञ फेला पार्न महत्त्वपूर्ण छ जसले विभिन्न स्तरका कारकहरू बुझ्दछ जसले तपाईंको उत्पादनहरू अमेजनसेक्स सर्पमा अधिकतम प्रदर्शन गर्नेछ।
तपाईंको सल्लाहकारलाई थाहा छ कि व्यावसायिक एसईओ सफ्टवेयर कसरी सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो
सबै अनुकूलन गतिविधिहरू मैन्युअल रूपले गर्नु हुँदैन किनकि यो कुशल र समय हुन सक्दैन -सम्पर्क गर्ने। यसैले तपाईंको सल्लाहकारले तपाईको व्यापारको लागि अधिकतम राजस्व ल्याउन सर्वोत्तम अमेजन उपकरणहरूसँग कसरी काम गर्ने भनेर थाहा पाउनुपर्छ। तपाईंले साक्षात्कार गर्ने चरणमा तपाईंको भविष्य अमेजन बिक्री बिक्री सल्लाहकारको जाँच गर्नुपर्छ। उहाँलाई सोध्नुहोस् कि अमेजन अनुसन्धान उपकरणहरू उहाँले जान्नुहुन्छ र तिनीहरूसँग कसरी काम गर्ने।
सर्वश्रेष्ठ अमेजन अमेजन अनुसन्धान उपकरणबाट, म निम्नमा फरक गर्न सक्दछ:
सेल्टल्ट ओटो एसईओ (आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ गुगल बाट ट्राफिक सूचीमा तपाईंको अमेजन सूची);
गुगल कीवर्ड प्लानर (तपाईंको लक्षित लक्ष्य खोज्नुहोस र स्थान को विश्लेषण गर्न सक्षम बनाइयो);
एम्बर ट्रकर (अमेजनमा तपाईंको उत्पादन रेटिङ ट्रयाक गर्दछ, प्रत्येक लक्षित कीवर्डको खोज भोल्युम देखाउँछ);
व्यापारी शब्द (खोजशब्दों को खोज मात्रा मा अनुमान प्रदान गर्दछ);
ब्रान्ड प्रतिष्ठा व्यवस्थापन।
तपाईंको अमेजन सेल बिक्री विशेषज्ञले किन अमेजनमा तपाईंको सफलताको लागि प्रतिष्ठा व्यवस्थापन आवश्यक छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तिनले तपाईंलाई सिकाउनुपर्छ कि तपाइँका हालका ग्राहकहरूको नकारात्मक प्रतिक्रिया र कसरी वैध र झूटो गम्भीर विवादहरू बीच भेद गर्ने काम गर्दछ।.नकारात्मक समीक्षाहरू साथै कम स्टार रैंकिङले अमेजनमा एसईओ प्रयासहरू नष्ट गर्न सक्छ। यही कारणले उनलाई छुटकारा पाउन कसरी सिक्न महत्त्वपूर्ण छ।
यो समस्या समाधान गर्न कम्तिमा तीन सिद्ध सिद्धान्तहरू छन्। सबैभन्दा पहिले, तपाईं अमेजनको ग्राहक-केंद्रित दर्शनसँग बोर्डमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, तपाईं निरन्तर रूपमा नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू हटाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईंको नकारात्मक पुनरावलोकन मामलाहरू पछ्याउन उत्प्रेरित। यद्यपि यो उल्लेख गर्न लायक छ कि यो विधि समय-उपभोग छ। तेस्रो, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ब्रान्डले कुनै बलियो सुरक्षासँग क्रमशः कसैलाई हटाउन सक्दैन।
एक राम्रो अमेजन सल्लाहकारले तपाईंलाई आफ्नो प्रतिष्ठा व्यवस्थापन गर्न वा तपाईंको लागि यो सबै काम गर्दछ (अतिरिक्त मूल्यको लागि प्रायः सम्भव छ)।
तपाईंको सल्लाहकारले अमेजन दिशानिर्देशहरू पछ्याउनुपर्दछ
कुनै पनि चोटबाट तपाईंको व्यवसायको रक्षा गर्न, तपाईलाई निश्चित हुनुपर्दछ कि तपाइँको अमेजन परामर्श विशेषज्ञ सबै अमेजनको अनुगमन गर्नुहोस्। दिशानिर्देशहरू र सबै अन्तिम रैंकिङ अद्यावधिकहरूसँग राख्नुहोस्।
उदाहरणका लागि, 2016 देखिदेखि सबै प्रोत्साहित गरिएका समीक्षाहरू प्रतिबन्धित छन्। यसको मतलब अमेजनले पत्ता लगाउँछ कि तपाइँ यी निषिद्ध गतिविधिहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने, तपाईलाई यसको लागि सजावट ड्रप, वा अदालतको साथ दण्डित गरिनेछ।
व्यावसायिक अमेजन बिक्री विशेषज्ञ सबै बजार उपन्यासहरु को बारे मा जान्नु पर्छ र उनको अनुसार आफ्नो विपणन अभियान को निर्माण गर्नु पर्छ।
तपाईंको अमेजन विक्रय विशेषज्ञले थाहा पाउनुपर्छ कि विक्रेता केन्द्रीय, बिक्रेता सेन्ट्रल र अमेजन ए + सामग्री
तपाईंको अमेजन सल्लाहकार पहिलो पार्टी र तेस्रो-पार्टी विक्रेताहरू बीचको फरक फरक फरक छ किनभने यो अमेजनमा अग्रणी व्यापारको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी हो। तपाईंको अमेजन व्यापार अभियानको तल्लो रेखामा, तपाईंले तयारी गर्न आवश्यक छ कि तपाईंको लागि राम्रो काम गर्ने विक्रेता केन्द्रीय वा विक्रेता केन्द्रीय।
यी प्लेटफार्महरू धेरै ढुङ्गाहरू, ढुवानी प्रक्रियाहरू, प्याकेजिङ्ग आवश्यकताहरू, र भुक्तानीहरू समावेश छन्। यसको अलावा, सूची व्यवस्थापनमा एक फरक फरक फरक छ र नियन्त्रणको स्तर व्यापारीले गरेको छ। तपाईंको अमेजन सल्लाहकारले यी अमेजन कार्यक्रमहरूको सबै प्रविधि र विपक्षको बारेमा जानकारी गराउनुपर्दछ र तपाईंको व्यवसायको लागि सबैभन्दा राम्रो हो कि सल्लाह दिन्छ।
यदि तपाईं अमेजनमा पहिलो-पक्ष विक्रेताको रूपमा काम गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको बिक्री सल्लाहकारले तपाईंलाई अमेजन ए + विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। यस प्रकारको सामग्रीले तपाइँका प्रतिस्पर्धाहरूमा फाइदा प्रदान गर्न सक्छ किनभने यसले उन्नत पाठ विकल्पहरू, भिडियो सामग्रीहरू, तस्बिरहरू र तपाईंको उत्पादन सूचीमा पहुँच दिन्छ। Source .
यी प्रकार्यहरूले तपाईंलाई आफ्नो रूपान्तरण बढाउन र Amazon किन्क्स बक्स जित्न मद्दत गर्नेछ। त्यो छ जहाँ तपाईंको परामर्शदाता समर्थक हुनु पर्छ।
अमेजनमा तपाईंको अमेजन सल्लाहकारले विज्ञापनको मूल्य बुझ्नैपर्छ। राम्रोसँग अनुकूलित लिस्ट भन्दा बढी हुनु आवश्यक छ, विशेष गरी यदि तपाईं यस प्लेटफर्ममा नयाँ हुनुहुन्छ भने। यही कारण विज्ञापन हो जुन तपाईंलाई आफ्नो व्यापार जागरूकता विस्तार गर्न र अधिक बिक्री जित्न आवश्यक छ। अमेजन बिक्री विशेषज्ञले अमेजन रैंकिंग अनियमितताहरूलाई बुझ्नै पर्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ कि तपाईंको विज्ञापनलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ। यदि उहाँले कम लगानीको साथ कसरी आफ्नो व्यापार राजस्व अधिकतम गर्न जान्नुहुन्छ भने, त्यो एक भयानक विशेषज्ञ हुनुपर्छ।
प्रति प्रति अभियान को अभियान र प्रायोजित उत्पादनहरु मा अमेज़न
अमेजन को प्रचार प्रचार अभियान छ जसलाई अमेजन प्रायोजित उत्पादन भनिन्छ। यो कार्यक्रमले तपाईंलाई आफ्नो सामान अमेजन बजारमा विज्ञापित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ताकि तिनीहरू खोज नतिजा पेजको शीर्षमा देखा पर्दछ। तपाईंको ब्रान्ड जागरूकता र उत्पादन दृश्यता सुधार गर्न यो सबैभन्दा तेज तरिका हो।
तपाईंको अमेजन सल्लाहकारले यस कार्यक्रमको अभावको बारेमा जान्नुपर्दछ र यसलाई अनुकूलित गर्न वा तपाईं सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईंको Amazon सलाहकारले भुक्तानी-प्रति-क्लिक विज्ञापनको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने अर्को पक्ष हो कि अमेजनले प्राय: प्रायोजित उत्पादनमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने उत्पादनको कार्बनिक पदोन्नति बढाउन सक्छ। यसको मतलब यो छ कि यदि तपाईंसँग तपाईंको अमेजन विज्ञापन अभियानको लागि सहि दृष्टिकोण छ भने, तपाइँ एक महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण दर र रैंकिंग वृद्धि पाउनुहुनेछ।
अमेजन मार्केट सर्विसेज
अमेजन विज्ञापनको विषयवस्तु जारी राख्न, यो अधिकतम बिक्रीको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण उल्लेख गर्न लायक छ - अमेजन मार्केटिंग सेवाहरू (AMS)। यो उपकरण प्रयोग हुनु पर्छ जब तपाईसँग राम्रो अनुकूलित लिस्ट र राम्रो विकास गरिएको विपणन अभियान छ। यो एक अतिरिक्त बिक्री प्रविधी प्रविधिको रूपमा सेवा गर्दछ र व्यापारीलाई विज्ञापन प्रदर्शन गर्ने क्षमताहरू प्रदान गर्दछ, र प्रतिस्पर्धाहरू लक्षित गर्दछ र अमेजन ग्राहकहरूमा अमेजनको डेटा स्टोरमा पहुँच प्राप्त गर्दछ। Amazon मार्केटिंग सेवाले प्रत्येक वस्तुको लागि प्रति प्रति क्लिक दर निर्धारण गर्न नीलामी बजार प्रयोग गर्दछ।
ती व्यापारीहरू जसले कहिल्यै AMS को साथ काम गरेनन उनीहरूलाई विचार गर्ने जानकारीको बारेमा निराश हुन सक्छ। यही कारणले गर्दा अमेजन सल्लाहकारले यो कार्यको लागि सहयोगी हुन सक्छ, तपाईलाई उत्कृष्ट मार्केटिंग विचारहरू र सल्लाहका टुक्राहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ।